द नेपालटप- The Nepaltop
ललितपुरको चिजवल फ्याक्ट्रीमा आगलागी
ललितपुर : ललितपुरको चिजवल फ्याक्ट्रीमा आगलागी भएको छ । गोदावारी नगरापालिका १३ स्थित झरुवाराशीमा स्थित गुराया फूड प्रोडक्टको फ्याक्ट्रीमा मंगलबार बिहानबाट आगाली सुरु भएको हो । बिहान ११ः३० बजेबाट सुरु भएको आगो अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन नसकेको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ । सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र विभिन्न निकायसहित तीनव
सरकारी छाप कीर्ते गर्ने २ जना पक्राउ
काठमाडौं : महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले सरकारी छाप कीर्ते गर्ने २ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका-८ का ३३ वर्षीय विनोद बरुवाल र काठमाडौं -१५ घर भई नागार्जुन-५ बस्ने ३३ वर्षीया रेनु लामा छन्। उनीहरूले सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको छाप कीर्ते गरेर बनाउँदै आएका थिए। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट विभिन्न व्य
सर्वदलिय बैठकमा राजपाबाट ठाकुर र यादव सहभागि हुँदै
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वदलिय बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट महन्थ ठाकुर र संयोजक राजकिशोर यादव सहभागि हुने भएका छन् । अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य अनिल झाका अनुसार राजपाले ठाकुर र यादवलाई उक्त बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको बताए । बताइए अनुसार सर्वदलिय बैठकमा शान्ति प्रकृया टुंग्याउनेबारे वृहत्त छलफल
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । आज दिउँसो तीन बजेका लागि बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज साँझ ५ बजेका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठकका कारण सचिवालय बैठक स्थगित गरिएको नेकपाले जनाएको छ । अर्को बैठक कहिले बस्ने भनेर खुलाइएको छैन ।
डोल्पा : विश्वको सर्वाधिक अग्लो स्थानमा अवस्थित मानववस्ती धो तरापमा ‘डोल्पो महोत्सव २०७६’ आयोजना गरिने भएको छ। डोल्पा जिल्लाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाको तरापस्थित क्रिष्टल माउन्टेन विद्यालय प्राङ्गणमा यही भदौ २४–२८ गतेसम्म सो महोत्सव आयोजना गरिने महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक ग्याल्पो थापा भोटेले सोमबार आयोजित पत्रकार स
फेसबुकमा खुकुरी देखाउँदै ओली, प्रचण्ड र देउवालाई ‘काट्छु’ भन्ने एक युवक पक्राउ
काठमाडौं : सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा खुकुरी देखाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई काट्छु भन्ने एक युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बाराका सागर क्षेत्री रहेका छन्। नेताहरुलाई गाली गरेको आरोपमा क्षेत्रीलाई बाराबाट पक्राउ गरेको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिए। पक्राउ परेक
वित्त मन्त्री राजेश अग्रवालले दिए राजीनामा
काठमाडौं : भारतीय वित्त मन्त्री राजेश अग्रवालले राजीनामा दिएका छन् । बुधबार हुने पहिलो क्याविनेट विस्तारको एक दिन अगाडी योगी सरकारमा वित्त मन्त्री अग्रवालले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै मन्त्रिमण्डबाट राजीनामा दिएका हुन् । प्राप्त समाचारका अनुसार वित्त मन्त्री अग्रवालले दुई दिन पहिला मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा पत्र दिएका थिए । स्व
मृत भेटिएका नायब सुब्बाकोे सुसाइड नोट : श्रीमतीलाई भने, ‘थोरै अंश पाइयो भनेर चिन्ता नगर्नू’
काठमाडौं : सिंहदरबार भित्रै मृत भेटिएका कर्मचारीको सुसाइड नोट भेट्टिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका नायब सुब्बा बच्चु केसी कार्यालयमै मृत भेटिएका थिए। अपराधस्थलमा खटिएका एक अधिकृतकाअनुसार, नोटमा श्रीमतीको नाम लिएर ‘थोरै अंश पाइयो भनेर चिन्ता नगर्नू’ भनेका छन्। आफूले ‘कसैका कारण आत्महत्या गरेको होइन । पत्रकार वा अन्यले अ
मन्त्री भन्छन् : उपचार गर्न विदेश जानुपर्दैन, सांसद सोध्छन् : प्रधानमन्त्रीकाे उपचार विदेशमा किन ?
काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले धेरै रोगको उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा मंगलबार सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री यादवले विश्वस्तरको उपचार सेवा नेपालमै भएकाले विदेश जानु नपर्ने बताए । साथै उनले नेपालका अस्पतालमा एसियामात्र नभइ यु्रोपबाट समेत उपचारकालागि आउने गरे
पार्टी एकता टुंगिँदै गर्दा किन दिए प्रभु साहले राजीनामा ?
जनकपुरधाम : गुटको पेलानले प्रभु साहले राजीनामा दिएको बताइरहँदा नेतृत्वसँग मन्त्री बार्गेनिङ्गको लागि पनि उनले राजीनामा दिएको हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । पछिल्लो समय प्रदेश २ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गुटगत राजनीति यसरी मौलाएको छ कि एक गुटले अर्को गुटलाई निषेध नै गरिन्छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच एकिकरणसँगै प्रदेश २ मा गुटगत र
निकिताको जाहेरी प्रहरीले लिएन
यु–१५ साफ च्याम्पियनसिप : भारतसँग नेपालको लज्जास्पद हार
यू–१९ एसिया कप क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक, नेपाल सहज समूहमा
रवि लामिछानेकी पत्नी निकिताले दिइन् किशोर श्रेष्ठ सहित तीन जनाविरूद्ध जाहेरी
१८ करोड रुपैयाँ हिनामिना आरोपमा बैंक म्यानेजर पक्राउ
सांसद यादवको प्रश्न : आरोप लगाएकै भरमा कसैलाई थुन्न पाइन्छ ?
आकाशबाट चुम्बकीय शक्ति भएको ढुंगा जमिनमा खस्यो
प्रदेश २ मा वर्षाको कहर : कस्तो छ आठ जिल्लाको पछिल्लो अवस्था ?
हप्तामा कति पटक यौनसम्पर्क गर्नु राम्रो हुन्छ !
घरबेटीले भाडाको साटो सेक्सकाे प्रस्ताब राखेपछि...
शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरण गम्भीर मोडमा : स्क्रिनसट सार्वजनिक (स्क्रिनसट सहित)